३१ जना सिडिओको सरुवा, को कहाँ? – मुलधार न्युज
Home > प्रशासन > ३१ जना सिडिओको सरुवा, को कहाँ?
काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले काठमाडौंसहित २४ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गरेको छ । काठमाडौंमा जनकराज दाहाल आएका छन् भने रामप्रसाद आचार्यलाई गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । ललितपुरका सिडिओ प्रेमराज जोशीको मकवानपुर सरुवा भएको छ । उनको ठाउँमा धादिङका भगिरथ पाण्डे आएका छन् ।
मोरङमा मदन भुजेल, रुपन्देहीमा महादेव पन्थ, बारामा फडिन्द्रमणि पोखरेल, सुनसरीमा राजेश पौडेल, झापामा उदयबहादुर राणा, इलाममा सीताराम कार्की, धादिङमा आशमान तामाङ, सुर्खेतमा बसन्त अधिकारी, बाँकेमा कुमारबहादुर खड्का, कास्कीमा रमेश केसी, मुस्ताङमा वेदप्रसाद अर्याल, जाजरकोटमा जनराज पन्तको सरुवा गरिएको छ । यस्तै, रुकुम पूर्वमा मोहनप्रसाद अर्याल, बझाङमा उमेश पाण्डेको सरुवा भएको छ ।
डा. कृष्णबहादुर घिमिरे धनकुटा, सुनिल खनाल सप्तरी, सूर्यबहादुर खत्री महोत्तरी र श्रवणकुमार तिमल्सिनालाई काभ्रेको कायममुकायम सिडिओको जिम्मेवारी दिइएको छ । दिर्घनरायण पौडेललाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालय प्रमूखमा सरुवा गरिएको छ । उपसचिव सुरेन्द्र पौडेललाई नख्खु कारागार प्रशासन प्रमूखमा सरुवा गरिएको गृहमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।